U qaado Beijing Zhangjiakou waddo tareen oo xawaare sare ku socda si aad u booqato "magaalada cusub ee barafka iyo barafka" Aagga tartanka Zhangjiakou wuxuu ku yaal Degmada Chongli, Magaalada Zhangjiakou, Gobolka Hebei. Galabtii 19, Kani waa saldhigga tareenka xawaaraha sare ee adduunka ugu horreeya ee toos u aada Olymp ...
Sidee loo isticmaalaa baaskiil wadista si loo yareeyo dufanka si wax ku ool ah xilliga qaboobaha?
Sida loo isticmaalo baaskiil wadista si loo yareeyo dufanka si wax ku ool ah ayaa welwel ku ahaa sanado badan. Cimilada qabow, gaar ahaan, waxay ku darsataa caqabado badan dhimista baruurta. Dhamaan cayaaraha luminta dufanka, baaskiil wadista si loo yareeyo baruurta ayaa ah doorashada ugu fiican dhimista baruurta xilliga jiilaalka, maxaa yeelay saameyn yar ayey ku leedahay jirka, ma sahlanaan doonto ...
Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee 2022 waxay dhiirrigelisay horumarka isboortiga jiilaalka ee Shiinaha, oo leh goobo lagu nasto oo ku dhow gobol kasta oo Shiinaha ah. Sannadka 2018 oo keliya, waxaa jiray 39 goobo dalxiis oo dhowaan la furay, oo wadartoodu tahay 742. Inta badan meelaha lagu nasto ee barafka ayaa wali si liidata ugu qalabaysan hal ama dhowr sixir c ...